Iingcamango ezi-6 zokuThengisa uMxholo woHlahlo-lwabiwo mali kumashishini amancinci | Martech Zone
Sele uyazi ukuba awunawo uhlahlo-lwabiwo mali lokukhuphisana "namakhwenkwe amakhulu." Kodwa iindaba ezimnandi zezi: umhlaba wentengiso yedijithali ulinganise intsimi ngendlela engazange ibonwe ngaphambili. Amashishini amancinci anendawo yeendawo kunye namaqhinga asebenzayo kunye nexabiso eliphantsi.
Enye yezi, ewe, ngumxholo wentengiso. Ngapha koko, inokuba yeyona ndleko iphambili kuzo zonke iindlela zokuthengisa. Nazi iindlela zokuthengisa ezinokuthi zisetyenziselwe onke amashishini amancinci:
Inethiwekhi kunye nokuBambisana
Amashishini endawo ayaliqonda ixabiso lothungelwano-ukuseka ubudlelwane namanye amashishini ekuhlaleni ukuze bafumane inzuzo. Kwigama ledijithali, okufanayo kuya kwenziwa. Unxibelelwano lunokwenzeka ngeendlela ezininzi:
Seka a LinkedIn profile kwaye ujoyine onke amaqela ahambelana nawo. Thatha inxaxheba kwiingxoxo kula maqela, uzazise njengengcali kwishishini lakho, kwaye wenze unxibelelwano. Olo nxibelelwano lunokubangela ishishini lize ngendlela yakho, ngokudluliselwa kunye neengcebiso.
Khangela amashishini ahambelana neebhloko kunye nokuseka ubudlelwane naba banini / iibhlog. Misela ubudlelwane obuzuzisayo, ukukhuthazana. Yikhumbule, nangona kunjalo, ukuba obu budlelwane kufuneka bube nemithombo edumileyo kunye nokunxulumene nayo, okanye unokufumana isohlwayo se-SEO.
Xa useta obu budlelwane bunqamlezayo, jonga ukusebenzisana ngokusebenzisa amaphulo okwazisa aqokeleleneyo, ukunikezelwa kwekhuphoni, njl. Oku kuyonyusa isiseko sabathengi bakho kwaye usasaze uphawu lwakho kwabanye abantu
Esi sisixhobo sentengiso sexesha elide kodwa sinokusebenza. Iindleko? Ixesha elininzi kunye nomzamo wokudala okunyanzelekileyo kunye nokubandakanya iiposti zebhlog ekujolise kuzo kwimakethi yakho. Izithuba zebhlog kufuneka zisombulule iingxaki kubathengi abanokubakho; zibhalwe ngobuchule; kufuneka zibandakanye ukubonwa kunye nezinye izinto zosasazo; kufuneka babelane ngokulula; kwaye kufuneka kube lula ukuzifunda nokuskena.
Unokufunda okuninzi malunga nokubhloga ngokufunda iibhlog ezithandwayo kunye neziphumeleleyo zabakhuphisana nabo kunye ne-niches ezinxulumene noko. Umceli mngeni wakho awuyi kuba kukwenziwa kwezi ziqwenga kuphela kodwa uya kuhlala uhambelana rhoqo kunye nokupapasha kwakho. Kukho izixhobo kunye nezixhobo ezinokukunceda wenze oku.
Ukuba ufuna ababhali bekhontrakthi, ungazama ezinye zeenkonzo zokubhala ezineenkonzo zokubhala, ezinje IsincokoSupply or FlashEssay.
Ukuba ufuna ukwenza uphando, unokufikelela Ababhali abakwi-Intanethi kunye nokufumana uphononongo lweenkonzo zokukhuphela zearhente eziphezulu
Jonga iisayithi ezinikezela ababhali abazimeleyo, ezinje Upwork kwaye Fivver. Ungajonga amava ababhali kunye nempumelelo kwaye uzame ezimbalwa.
Ukuba uthatha isigqibo sokubhala kunye nokugcina ibhlog ngokwakho, okanye nokuba ukhetha ukusebenzisa ababhali abanesivumelwano, uya kudinga ukuza nemibono yesihloko kwezi blog. Eyona ndlela yokwenza oku kukujonga abo ukhuphisana nabo kwaye ubone ukuba zeziphi izithuba ezithandwa kakhulu. Thatha ezo zimvo kwaye uphucule kuzo. Unokujonga kwakhona iisayithi ezinje Buzzsumo ukufumana ezona zihloko zihamba phambili kwi-niche yakho.
Yila i-Elevator Pitch
Ufuna i-30-yesibini yoyilo intetho onokuyisebenzisa nangaliphi na ixesha, nakweyiphi na indawo, xa umntu ebuza, Ingaba wenza ntoni? Ibizwa ngokuba yi ikhefu ephakamileyo kuba kuya kufuneka ubenakho ukuyinika iyonke ngexesha elithathayo ukukhwela ikhetshi phezulu okanye ezantsi. Esi sandi kufuneka silungiselelwe ngobuchule kwaye sigxile kwixabiso ozisa lona kubathengi / kubaxhasi bakho. Ungajonga ezinye imizekelo enkulu yokuhamba kwelifti kwaye uyenzele enye. Yibambe ngentloko. Kwaye ube nekhadi lakho leshishini lilungele ukuhambisa ngexesha elinye.
Ngelixa abaninzi bekholelwa ukuba i-imeyile ayisasebenzi (iibhokisi zebhokisi yangaphakathi zifakwe kwi-brim ngokukhushulwa kunye neentengiso), oku akunjalo. Ngapha koko, ngokomndilili, i ukubuya kuyo yonke i- $ 1 echithwe kwintengiso ye-imeyile yi- $ 38. Ixabiso elihle kakhulu.
Isitshixo kukwenza kakuhle kangangokuba abantu bavavanye ii-imeyile zabo baya kufuna ukuvula eyakho. Nazi ezinye iingcebiso:
Sukuba ugaxekile. Musa ukuthenga uluhlu kwaye uthumele ii-imeyile ezininzi-azisebenzi
Ngokuthe ngcembe khulisa uluhlu lwakho ngokufumana ababhalisile kwezinye iindawo zomxholo-iwebhusayithi yakho, ibhlog yakho, amajelo eendaba ezentlalo
Hlula uluhlu lwakho ngokubhekisele apho akhoyo / abathengi bakho kuhambo lwabo lokuthenga. Kuya kufuneka bafumane ii-imeyile ezahlukeneyo.
Funda i-imeyile oyifumana ngokobuqu kumashishini akuthandayo. Yintoni ebangela ukuba uvule ezinye zazo hayi ezinye? Oku kuya kukunika ezinye izimvo ezintle malunga nokwenza ezakho.
Gxila kumgca wesifundo. Ukuba kuyanyanzeleka, unethuba elikhulu kakhulu lokuvula. Sebenzisa okukhoyo izixhobo zokwenza izihloko eziphambili, ukuba awuziva uyile ngokwakho. Kwaye, ezi zixhobo zingasetyenziselwa iintloko / izihloko zezithuba zakho zeblogi kunye nezithuba zemidiya yoluntu.
NjengoShelly Crawford, iNtloko yeSebe leMixholo e Qalisa kwakhonaCentre, ithi: “Kusithathe ixesha ukuyifumana yonke le nto yentengiso ye-imeyile. Besiphosa nje ii-imeyile phaya, ngethemba lokuvelisa nokuba yipesenti encinci yokuphendula. Nje ukuba sithathe isigqibo sokuyisebenzisa le nto, sisebenzise idatha kunye nezahlulo, kunye nobuchule obufuneka kakhulu kwimigca yezihloko, sabona into evulekileyo. ”
Oku kuhamba ngaphandle kokuthetha. Kwaye mhlawumbi ufunde ngokwaneleyo malunga nentengiso yemidiya yoluntu ukwazi oku kulandelayo:
Awunakho ukuba kulo lonke iqonga- uya kuzisasaza unciphe kakhulu kwaye ungabinakho ukugcina elinye kuwo kakuhle.
UChris Mercer, CEO we Isilumkiso, ukubeka ngale ndlela:
Abathengi bethu bancinci, ikakhulu abafundi. Sigxila kuFacebook, Instagram, nakwiSpapchat kuba siyazi ukuba siya kubafumana apho. Ingcebiso yam kukuba uye kuphela apho uyazi ukuba kukho inani elikhulu labaphulaphuli ekujoliswe kubo kwaye uthumele kakhulu kwaye rhoqo kangangoko kunokwenzeka. Uya kufumana iziphumo.
Yenza uphando ukuze ufumanise apho abaphulaphuli bakho bakumajelo asekuhlaleni, kwaye ukhethe amaqonga amabini aphezulu ukumisela ubukho bakho. Emva koko, thumela rhoqo kuzo. Oku kulawulwa ngakumbi.
Cinga ngomxholo weposti yakho. Inqaku kukuseka unxibelelwano lomntu kunye nobudlelwane nabaphulaphuli bakho. Unokuba nehlaya lomhla, isicatshulwa esikhuthazayo sosuku. Abalandeli baya kuhlala bebuya kwaye baya kwabelana.
Bandakanya abathengi bakho - sebenzisa uphando kunye nemibuzo; Faka abathengi kwizithuba zakho. Bonisa icala lomntu kwishishini lakho. Amashishini amaninzi enza ezi zinto kakuhle kakhulu. Balandele kwaye uxelise indlela abazenza ngayo izinto.
Izinto eziBonakalayo kunye neMedia - Awunakuyenza Ngaphandle Kwayo
Imboleko yeMfanekiso: Neomam
Ngoku ka uphando, abantu abalandela umkhombandlela ngesicatshulwa kunye nemifanekiso benza i-323% ngcono kunabantu abalandela umkhombandlela ngaphandle kwemifanekiso.
Akuzange kube lula ukusebenzisa ukubonwa (iifoto, infographics, imizobo, kunye nokugqwesa) kumxholo wakho. Kwaye iividiyo ziyeyona ndlela ithandwayo yokufumana umxholo kubaphulaphuli. Abantu baya kubukela ividiyo ngaphezulu kokufunda okuninzi.
Uphendlo lukaGoogle lwezixhobo zokwenza naziphi na ezi zinto ziboniswayo ziya kuzisa inani elikhulu, uninzi simahla. Akukho sizathu sokungampompozi kokubonakalayo kunye neevidiyo kangangoko unako ukwazisa iimveliso okanye iinkonzo zakho, ukubonisa wena neqela lakho, ukucacisa okanye ukunika kwenziwa kanjani uqeqesho, njl.
Unokuzama umxholo ongokoqobo ongathandabuzekiyo-kukho izixhobo zokwenza oku kwenziwe nako.
Khumbula oku: umthengi wanamhlanje ufuna ukubona ubunyani kumashishini. Ukuba intombazana encinci kwimveliso yokubonwayo kunye neevidiyo yindlela entle yokwenza oku. Okungaphantsi kokusesikweni, ngcono.
Njengomnini weshishini elincinci, ixesha lakho lixabisekile. Kodwa ukuthengisa kufuneka kube yinxalenye enkulu yexesha kunye nomzamo owusebenzisayo. Awungekhe ukhule ngaphandle kwayo. Kodwa urhwebo alunyanzelekanga ukuba "lwaphule i-bhanki" ngokubhekisele kuhlahlo-lwabiwo mali. Unokukhetha okuninzi ngoku kwintengiso yexabiso eliphantsi- zisebenzise.
tags: buzzumochris mercerukujonganaikhefu ephakamileyoemail MarketingUkufumana isincokofivverubengezihlokoNeomanzokunxibelelanakwiintanethiqalisa kwakhonainethiwekhi yokuncokolaUmsebenzi
UJames mihla le
UJames mihla le ngumbhali oqeqeshiweyo kunye nomxholo wentengiso. Xa engabandakanyeki kwimisebenzi enxulumene nomsebenzi, ulandela ezinye izinto anomdla kuzo, kubandakanya i-astronomy, psychology, kunye ne cinema. Zive ukhululekile ukunxibelelana naye ngebhlog yakhe Ubungqina.
Uzirekhoda njani iindwendwe zaseKhaya ezininzi kwiZoom yakho H6 kunye nondwendwe olukude eGarageband
Ungaziphatha njani izithethi zakho zasesidlangalaleni